The Story of Maung Tint De, The Strong Man
Maung Maung Pye
Macmillan and Co., Ltd, 1952
တစ်ခါတုန်း အထက်ဗမာနိုင်ငံ တကောင်းပြည်က ပန်းပဲဆရာတစ်ယောက်မှာ မောင်တင့်တယ်ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ အဲဒီ မောင်တင့်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ဟာ ဆင်ပြောင်ဆယ်စီး အားမာန်ကြီးပြီး သူ့ခွန်အားဗလကြောင့် ရပ်ဝေးရပ်နီး ကျော်ကြားသတဲ့။ သံချောင်းကြီးတွေကိုလဲ ထက်ပိုင်းချိုးနိုင်၊ ဆင်တစ်ကောင်ကိုလဲ ပခုံးပေါ်မှာ ထမ်းနိုင် ဆိုပဲ။ In the land of Tagaung, in upper Burma, there once livedablccksmith who hadason called Maung Tint De. Now this young man had the strength of ten elephants, and his mighty feats made him famous for many miles around. He could bendahuge iron rod in two, and carry an elephant on his strong shoulders.
အဲဒီလို ခွန်အားဗလသတင်း၊ကြားတဲ့အခါ တကောင်းမင်းကြီးဟာ သူ့ထီးနန်းကို မောင်တင့်တယ် လာလုမှာ ကြောက်ရှာသတဲ့။ ဒါကြောင့် အစိုးရိမ်ပျောက်သွားအောင် မောင်တင့်တယ်ကို ဖမ်းဖို့ သူ့မှူးမတ်တွေကို အမိန့်ပေးသတဲ့။ ဒီလိုသတင်းမျိုးဆိုတာက ထိန်းထားလို့မရပဲ။ ဘုရင်ကြီး ဘာတွေကြံနေတယ်ဆိုတာ မောင်တင့်တယ် ကြားတာပေါ့။ ဒါနဲ့ တောထဲကို ထွက်ပြေးပြီး ပုန်းနေသတဲ့။ The king of Tagaung heard about these feats and became afraid lest Maung Tint De should try to usurp his throne. He therefore ordered his ministers to capture the blacksmith's son and so put an end to his fears. Bad news travels fast, and Maung Tint De soon heard what the king intended to do. So he fled to the forests and took refuge there.
တွေးကြောက်နေရတဲ့ ရန်သူကို အမိဖမ်းဖို့ ဘုရင်ကြီးလဲ တမျိုးကြံပြန်တာပေါ့။ မောင်တင့်တယ်ရဲ့နှမ စောမယ်ယာကို လက်ထပ်ပြီး သီရိစန္ဒာဆိုတဲ့ ဘွဲ့ပေးသတဲ့။ အဲဒါလဲ အခိုင်အမာ ဖြစ်ပြီးရော နန်းတော်မှာ သူ့အကိုကို ရာထူးပေးမယ်လို့ စောမယ်ယာကို ပြောတော့တာပဲ။ ဒီကိစ္စမှာ ဘာမှ အန္တရာယ်မမြင်တော့ ပုန်းနေတဲ့သူ့အကိုကို နန်းတော် အရောက်လာဖို့ စောမယ်ယာ မှာလိုက်တာပေါ့။ နေပြည်တော်လဲရောက်ကရော မောင်တင့်တယ်ကို ဘုရင့်လူတွေက ဝိုင်းဝန်း၊ ကြိုးနဲ့တုပ်နှောင်ပြီး ထောင်ထဲ ထည့်လိုက်တော့တာပေါ့။ Then the king tried another way to capture his imaginary enemy. He married Maung Tint De's sister, Saw Maiya, and gave her the title of Thirisanda. When this was safely accomplished, he suggested that her brother should be appointed an official at court. As she saw no harm in this, Saw Maiya sentamessage to her brother, who was hiding, and asked him to come to court. No sooner did he appear in the city then he was surrounded by the king's men, who promptly bound him with ropes and put him in prison.
နောက်နေ့မနက်လဲကျရော မီးဖိုးကြီးတခုပေါ်မှာ ကံဆိုးရှာတဲ့မောင်တင့်တယ်ကို တင်ထားသတဲ့။ ဘာရာဇဝတ်မှုမှမကျူးလွန်ဘဲ ဘုရင်က အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ကြောက်တာနဲ့ ဝေဒနာခံပြီး သေရတော့မယ်ပေါ့။ Next morningahuge pyre was prepared, and the unfortunate Maung Tint De was placed on it. He had not been guilty of any crime, and was to suffer this cruel death merely because the king , for no reason at all, was afraid of him.
အကိုရောက်တာကို လျှို့ဝှက်ထားတော့ စောမယ်ယာက သူ့အကိုကို မျှော်နေရှာတယ်။ ဉာဏ်များလှတဲ့ဘုရင်ကြီးက သူ့ရန်သူသေသွားတာကို မြင်စေချင်တော့ ကွပ်မျက်တဲ့နေရာကို စောမယ်ယာပါ ခေါ်သွားသတဲ့။ Saw Maiya was still waiting for her brother, for his arrival had been kept secret. The crafty king wanted her to witness the death of his fancied rival, so he took her to the place of execution.
မောင်တင့်တယ်ဟာ နှမကလေးကို သိပ်ချစ်တာပါ။ နှမလေးအတွက်ဆို ပျော်ပျော်ကြီး အသက်ပေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်ကြီးက သူ့နှမကလေးရောက်လာတာ မြင်တော့ နှမလေးဟာ သူ့အပေါ်သစ္စာဖောက်ပြီလို့ အောက်မေ့ပြီး စက်ဆုပ်ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ စိတ်နှလုံးကြေကွဲရှာသတဲ့။ Maung Tint De had always deeply loved his sister, and would gladly have given his life for her, but when he saw her approaching with the king he thought it was she who had betrayed him, and his heart broke with sorrow and horror at her treachery.
မင်းမိဘုရား ဖိုကျင်ထိုးတဲ့နေရာကို ရောက်လာတော့ မီးခိုးတွေကြောင့် မောင်တင့်တယ်ကို ရုတ်တရက် မမြင်ရဘူးပေါ့။ မီးခိုးတွေလဲ တက်သွားရော မီးဖိုပေါ်မှရောက်နေတာဟာ သူ့အကိုကြီးကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတာတွေ့သတဲ့။ အကိုကြီးရော ကိုယ်တိုင်ရော ယုတ်မာတဲ့ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ လှည့်ဖြားတာခံလိုက်ရပြီ ဆိုတာ တွေးမိတယ်။ စောမယ်ယာဟာ ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲ မီးတွေတောက်နေတဲ့မီးဖိုးရှိရာကို တဟုန်ထိုးပြေးသွားပြီး ကံဆိုးလှတဲ့အကိုကြီးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ လှဲချလိုက်သတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် သိပ်တွယ်တာကြတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက် အတူတူ အသက်ဆုံးရှုံးသွားသတဲ့။ The king and his queen arrived at the pyre, and for some time the smoke hid the poor victim from their view. Suddenly the smoke lifted, and Saw Maiya perceived that it was her own dear brother who was lying on the pyre, and realised at once that both he and she had been tricked by her wretched husband. Withoutasecond thought she dashed towards the flaming pyre and threw herself on the body of her ill-fated brother. Thus perished togetherabrother andasister who were all in all to each other.
မောင်တင့်တယ်ကို ဒီနေ့ထိ အိမ်စောင့်နတ်အဖြစ် ကိုးကွယ်နေကြတုန်းပါ။ Maung Tint De is worshipped even to this day as the guardian spirit of Burmese homes.